မည်သည့်မျက်နှာပြင်ကိုမဆိုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုယူဆောင်လာရန် Globecast Live က Globecast ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Globecast ဆိုမျက်နှာပြင်မှမဆိုဖြစ်ရပ်ရောက်စေဖို့ Globecast တိုက်ရိုက်ကြေငြာလိုက်သည်
မည်သည့်မျက်နှာပြင်မှမဆိုအဖြစ်အပျက်: Globecast, မီဒီယာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ပေးသူ, Globecast တိုက်ရိုက်၏ပစ်လွှတ်ကြေညာခဲ့သည်။ ဤသည်ဖောက်သည်ခွင့်ပြု - ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် B2B နှစ်ဦးစလုံး - တစ်ဦးအပြည့်အဝပေါင်းစည်းအလှူငွေထဲကနေအကျိုးခံစားရဖို့နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာခြာ (ဇလဌာန) content တွေကိုအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာ။
တိုက်ရိုက်လွှအကြောင်းအရာဝယ်ယူကျွမ်းကျင်မှုယင်း၏အနှစ်ကိုပေါင်းစပ်ပြီး - အဓိကအားကစားပြိုင်ပွဲကနေသေးငယ်-စကေး B2B ဖြစ်ရပ်များ - အကြောင်းအရာထုတ်ဝေဝန်ဆောင်မှုများကို၎င်း၏ဇလဌာန Cross-platform suite ကိုအတူ Globecast ဆိုမျက်နှာပြင်မှမဆိုအဖြစ်အပျက်ကနေ turnkey တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာဖြေရှင်းချက်ဖန်တီးထားသည်။
သူတို့ပြုသမျှပုံစံများအတွက်အင်ထရာနက်, extranets, လူမှုရေးမီဒီယာ, ရေတိုနှင့်တာရှည်-form ကို VOD, linear ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် OTT န်ဆောင်မှု: Globecast တိုက်ရိုက်များအတွက်သင့်လျော်သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာ၏ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခွင့်ပြု, အထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် B2B ဆက်သွယ်ရေးစျေးကွက်နှစ်ခုလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာကိုလည်းဇလဌာန၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အကြောင်းအရာ Marketplace မှတဆင့်သိမ်းဆည်းထားနောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုမှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါစေနိုင်ပါတယ်။
Globecast မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးချနိုင်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောပံ့ပိုးမှုများဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါဆန်းသစ် M'ICar (သေးငယ်တဲ့မော်တော်ယာဉ်) မှဆယ်လူလာ Bond တစ်စပ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုနှင့် Ka-band ဂြိုဟ်တု ဖိုက်ဘာတစ်ဦးပြည့်စုံအကွာအဝေးရန်နှင့် / သို့မဟုတ်မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှု ဂြိုဟ်တု မည်သည့်ဖြစ်ရပ်ကိုက်ညီနိုင်ဆက်သွယ်မှုဖြေရှင်းနည်းများ။
Globecast တိုက်ရိုက်မဆိုဗွီဒီယိုကို format ကိုကိုင်တွယ်။ လယ်ပြင်၌ရှိသောသူတို့နှင့်အတူ two-လမ်းဆက်သွယ်ရေး - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုနှင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး - လည်းရရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ်ဖိုင်လွှဲပြောင်း။
Liz McParland, ပံ့ပိုးမှုများကိုကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒါရိုက်တာနှင့် Global ညှိနှိုင်းရေး, Globecast, ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်လွှအကြောင်းအရာစုရုံးတစ် turnkey suite ကိုဖန်တီးရန်, အားကစား, သတင်းနှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များကိုဖြတ်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာဝယ်ယူဈေးကွက်ထဲမှာ 20 နှစ်ပေါင်း '' အတွေ့အကြုံကိုထက်ပိုယူကြပြီ "ဟုပြောသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub နှင့် တွဲဖက်. များတွင်အသုံးပြုနိုင်န်ဆောင်မှု။ ဒါကကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်တစ်ခုတည်းပေးသွင်းသူထံမှရရှိနိုင် လိုက်. မဆိုနှင့်တိုင်းအခါသမယများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းနည်းများ, ပူဇော်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ "
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဆယ်လူလာ Bond အထောက်အပံ့ အလှူငွေ Workflows အမှငျြ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု OTT ဂြိုဟ်တု SJGolden - လှံ & Arrows TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-03-18
ယခင်: နွေရာသီ 2019 - ဆက်သွယ်ရေး International (Paid)
နောက်တစ်ခု: V-Nova NAB 2019 မှာမီဒီယာအခင်းအကျင်းကိုဖြတ်ပြီး Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Compression ကို၏စစ်မှန်သောပါဝါကိုရည်ညွှန်းပြသ